NLD အစိုးရ ဖြေပေးပါ။ (၁) - News @ M-Media
NLD အစိုးရ ဖြေပေးပါ။ (၁)
in ဆောင်းပါး — October 24, 2016
ဒီကနေ ဆိုရှယ်မီဒီယာ မှာ သတင်းတပုဒ် ပြန့်နှံ့လာတယ်။ အကြောင်းက သာကေတ မြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ကျောင်းကို မျိုးချစ်ဆိုသူတွေ သတင်းအရ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်တဖိုင် ပါ အကြောင်းအရာတွေပါ။
ဒီဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တင်တဲ့လူက တော့ “တန်ဘိုး” အမည်နဲ့ Facebook အသုံးပြုသူပါ။ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ တကွ ရေးထားတဲ့စာကတော့ အောက်အတိုင်းပါ။
အလားတူ ၈ မိနစ်ခန့် ရှိတဲ့ ရုပ်သံဖိုင် တဖိုင်ကို လည်း သူက တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဆိုပါရုပ်သံမှာတော့ မိဘမဲ့ဂေဟာနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ဟာဂျီ ဦးမောင်မောင်က လာရောက်တဲ့လူတွေကို အသေးစိတ် ရှင်းပြနေတဲ့ ရုပ်သံပါ။
သာကေတ က မျိုးချစ်ဆိုသူတွေက အဆိုပါ မိဘမဲ့ဂေဟာကို အလှူငွေ ဘယ်က ရတယ်၊ ကျောင်းသား ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ ဘယ်က လာတယ် တရားခံကို ရဲ က စစ်သလို စစ်မေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မိဘမဲ့ ဂေဟာ ဥက္ကဌ ဟာဂျီဥိးမောင်မောင်က ယခု အဆောက်အအုံဟာ စစ်အစိုးရ လက်ထက် ကမာရွတ်မြို့နယ်က ကြံတော မွတ်စလင်မ် သုသာန်ဖျက်ခံရတဲ့အချိန် အဆိုပါ သုဿန်ဝင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း အစား ပေးခဲ့တဲ့ နေရာဖြစ်ပြိး အဆောက်အအုံက အစ အစိုးရ ဆောက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါအချိန်က အာဏာပိုင်တွေဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ခင်ညွှန့်၊ ဗိုလ်ချူပ်တင်ဦးတို့ကိုယ်တိုင် တရားဝင် အစားပေးဖို့ ညွှန့်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မြို့တော်ဝန်ဦးကိုလေးက လယ်ရွာသုသာန်ဟောင်း ဝင်းအတွင်းမြေနေရာ စီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများလိုချင်ပါက ချက်ခြင်းမိတ္တူဆွဲခိုင်း ယူသွားဖို့ စီစဉ်ပေးနေတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
မေးချင်တာက မျိုးချစ် ဆိုတဲ့ လူတစုဟာ သတင်းရတယ် ဆိုတာနဲ့ မိမိနဲ့ ဘာသာမတူသူတွေရဲ့ ပိုင်နက် အဆောက်အအုံကို အာဏာပိုင် တရပ်လို့ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးမေးမြန်းခွင့် ရှိပါသလား? သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချူပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေ မပါဘဲ ထင်သလို ဝင်ချင်တိုင်းဝင် ထွက်ချင်တိုင်းထွက် ပြီး ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာဟာ ဥပဒေနဲ့ ညီသလား?။
ဒီလို စစ်ဆေးမှုတွေကို သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတွေမဟုတ်ဘဲ ထင်သလို ဝင်ပြိး ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဖြန့်ချီနေတာ လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး ပြသနာတွေ ကြီးထွားအောင် မီးမွှေးတာ မဟုတ်ဘူးလား ? အခုလို ဥပဒေမဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာကို အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ တစုံတရာ အရေးယူ ဟန့်တားဆောင်ရွက်ဖို့ တာဝန်မရှိဘူးလား?
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအပြတ်အသတ်နိုင်ပြီး အစိုးရ တရပ်ဖြစ်လာတဲ့ NLD အစိုးရဟာ ဘာသာစုံ က နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အသဲတကြားက မဲတပြားနဲ့ အနိုင်ရလာဖြစ်လို့ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အခြေခံ အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမှာ တာဝန်တရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးချစ် အမည်ခံ အဖွဲ့တွေ ဒီလို ဥပဒေမဲ့ ထင်သလို လုပ်ရပ်တွေကို NLD အစိုးရ အနေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲ မသိကျိုးနွံပြုလုပ်နေတာကြောင့် လူနည်းစု ဘာသာဝင်တွေကို ထင်သလို အနိုင်ကျင့်မှုတွေ တနေတခြားပိုမိုများပြားလာတာ အထင်အရှားပဲဖြစ်တယ်။
အခြေခံဥပဒေမှာ အတိအလင်း အာမခံပြဌာန်ထားတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ပြီး စိတ်ထင်တိုင်း ဥပဒေမဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မျိုးချစ် အမည်ခံ အုပ်စုတွေကို NLD အစိုးရအနေနဲ့ တရားဥပဒေ အတိုင်းမည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ကို မေးခွန်းထုတ်လိုပါတယ်။ ဒီလို ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်ဆောင် အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို NLD အစိုးရအနေနဲ့ ဘယ်လို အကာအကွယ်ပေးဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ်။